SIDA LOO BADBAADIYO DABACASAHA XILLIGA QABOOBAHA EE GURIGA, HADDII AANAY JIRIN MAQNAANSHO: HABAB WAX KU OOL AH IYO XEERARKA LAGU ILAALINAYO DALAGGA ILAA GUGA - KHUDRADDA
Karootada - waa mid ka mid ah khudaarta ugu caansan, oo leh ujeedo guud. Waxaad u isticmaali kartaa foomka cusub ee qasacadaysan, iyo sidoo kale lagu keydiyay guga.
Inta badan, khudradda asalka ah ayaa lagu kaydiyaa maqaasiinka, laakiin dhammaan guryaha ma bixiyaan.
Tani ma aha sabab ay uga tagaan beergooyska, sida aad u badbaadin karto muuqaalkeeda iyo dhadhanka adoo adeegsanaya siyaabo kale oo wax ku ool ah.
Qaababka qaabdhismeedka alaabta
Karootada waa laba sano oo dhaqameed ah, kaas oo horumariyay awooda uu ku noqon karo heerkul hooseeya xaalad ah dormancy yar. Marka uu abuuro xaalado buuxa, korniinkeeda mar kale ayaa dib loo soo celiyaa. Xaaladda nasashada khasabka ah waxaa looga baahan yahay geedka si loo dhamaystiro dhammaan geedi socodka koritaanka.
Iyadoo bilawga xilliga dayrta, kobcintooda heerkul sare waxay qaadataa dabeecad daaqsimeed. Guga, ka dib markii muddo cayiman, sprouts ayaa la sameeyay. Kuwani waa bilawga dhalashada caleemaha mustaqbalka.
Xaaladda midhaha oo aan dillaacin, geeddi-socodka duufsashada ee ubbooyinku waa aan la dhammeystirin muddo dheer, sidaas darteed waxay ku kala duwan yihiin heer sare ah.
Heerka koriimada ee karootada waxaa lagu fahmi karaa saamiga sukrose ilaa monosaccharides. Haddii ay ka sarreyso 1, ka dibna koriinku waa mid aad u sarreeya oo dhacdadu waa mid sarreeysa, haddii ay ka yartahay 1, markaa koriinkartu waa mid sabool ah oo dhacdadu ay yar tahay.
Waa noocee lagu kaydin karaa jiilaalka?
Kaydinta dheer ee dalagga ee xilliga jiilaalka ee guri dabaq ah oo aan Maqsin ku xiran tahay doorashada ee kala duwan.
Haddii aad isticmaashid noocyo hore iyo mid dhexdhexaad ah, way liidataa qoyaan, sidaas darteed, si aad u isticmaasho kaydinta dheeraadka ah maaha mid ku habboon. Waxaa lagu talinayaa in lagu dabaqo ilaalinta.
Kaydinta muddada-dheer waxaa lagaa rabaa inaad dooratid noocyo goor dambe ah., dhererka dalagyada xididku ka yar yahay 20 cm Ujeedadaas, noocyada noocan ah dabacasaha waa kuwo qumman:
Waxay leeyihiin nolol shelf oo ka badan kuwa kale.
Siyaabo wax ku ool ah
Sidaas sida ugu wanaagsan ee loo keydiyo karootada? Dalagyada rootiga waxaa lagu kaydiyaa Maqsin iyadoo la isticmaalayo habab badan:
Habkani waa midka ugu caansan. Shub 5-6 kg dalagyada xidid la diyaariyey boorsada, xerin iyo saaray qumman. Haddii uumeysi dhaco, waa in dalool yar yar laga dhigo derbiyada si loo nadiifiyo.
Waxaad ku xiran kartaa 20 kg oo khudaar ah boorso, laakiin markaa waxaad dhigi kartaa balka qoyan dusha sare, lakabka kaas oo ah 10 cm.
Faa'iidada ugu weyn ee habka waa in bacda ay samayso qoyaan badan iyo qadarka loo baahan yahay ee kaarboon dioxide. Tani waxay saameyn wanaagsan ku leedahay ilaalinta tayada dabacasaha.
On top of baradho.
Maqsin ku saabsan baraf baraf ah, dabacasaha waa in la dhigaa lakabyada, dhumucdiisuna waa 2-3 cm. Sidaa daraadeed, dalagyada xididada waxay nuugaan qoyaan dheeraad ah.
Nuxurka habkan ayaa ah in la gooyo xididada dhoobo dhoobo oo ku rid sanduuqyo leh daldaloolo.
Si aad uhesho qof hadal ah, waxaad u baahan tahay inaad dhajisid dhoobo biyo si aad u hesho mid isku mid ah. Lakabka dhoobada ayaa si tartiib ah ugu qallaji doona khudradda waxayna ka ilaalinayaan cayayaanka, qoyaanka qoyaanka iyo cudurrada kala duwan. Ka hor inta cunidda dabacasaha, dhoobada si fudud ayaa loo dhaqaa biyo cad.
Qoryo saar dhulka dabaqa hoose. Dhumucda lakabka waa in ay ahaataa 5 cm, karootada lakabiga ku rid safafka si markaa xididada loogu wareejiyo gudaha. Xaaladdan oo kale, xididada waa in aysan xiriir la wadaagin. Ku dabool khudaarta cufan 1-2 cm oo jiifso safka cusub ee dalagga. Sidoo kale, samee xakameyn illaa 1 m.
Haddii dhulka hoostiisa qallalan yahay, ciidadu waa inay qoyaan. Haddii qolku qoyan yahay, ciidku waa qalalan yahay.
In sida balka.
Balka dhaadheer waxaa loo isticmaalaa in lagu keydiyo karootada. Habkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ilaaliso khudaarta laga bilaabo biqilka iyo kalluunka cad. Xaqiiqdu waxay tahay in sida balka ah uu ka kooban yahay saliid lagama maarmaan ah, oo leh saameyn jeermiska.
Dhoobada waa inay qoyaan 18-20%. 200 kg oo dalag ah, 0.1 m3 oo bakeeriga loo baahan yahay.
Bacaha caadiga ah iyo xashiishka ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa kaydinta.
Miyaan ka tagi karaa khudaarta ka baxsan dhulka hoostiisa?
Dabcan waad awoodi kartaa. Waxaa jira habab gaar ah oo lagu keydiyo dalagga iyada oo aan la isticmaalin maqaasiinka. Haddii aad si buuxda u buuxiso shuruudaha oo dhan, markaa xididdada la uruuriyay waxay ka sii xumaan doonaan marka loo eego dhulka hoostiisa, iyagoo ilaalinaya dhadhanka iyo muuqaalka. Dibedda dhulka hoostiisa, tusaale ahaan, karootada la qalajiyey ayaa si wanaagsan loo ilaaliyaa.
Maxaa dhacaya haddii aysan jirin god?
Haddii aysan jirin wax maqaasiinka iyo godadka kaydinta, waxaad isticmaali kartaa hababka soo socda:
Si aad u dhigto karootada balakoonka waxaad u baahan tahay inaad diyaariso sanduuq caag ah, balka ama ciid. Iyadoo habkan kaydinta waxaa muhiim ah in heerkulka uusan ka sarreeynin 0 darajo, oo iftiinka qorraxdu uusan u dhexgalin xididadahaddii kale tayada ay hoos u dhacayso. Karootada waxay bedeshaa midabka, bilaabaan in ay cagaaraan, iyo dhadhanka ayaa dhadhan qadhaadh ah.
Ka hor inta aan la saarin xididdada laga nadiifiyo dhulka, waa la dhaqay oo la qalajiyey.
Ka dibna ku dul shub sanduuqa hoose ee sanduuqa, dhumucdiisuna dhererkoodu waa 2 cm. Xididdada xididdada safafka ku buuxi oo buuxi ciid.
Sidoo kale, waxay fidiyaan xididada ilaa ay buuxiyaan dhamaan dhererka sanduuqa.
Samee awoodda balakoonka ama loggia.
Haddii habka kaydinta ee qaboojiyaha loo doortay, ka dibna dalagga waa in la dhaqaa oo la qalajiyaa 2-3 saacadood.
Iska yaree dushooda, qaado caag balaastig ah oo 3-4 khudradda ah si adag u duub 2-3 lakab, kadibna 2 kale oo dheeri ah filimka.
Qaybaha yaryar si loo kariyo karootada qaboojiyaha sanduuqa ku keydinta khudaarta.
Taas ka dib, iska hubi in aysan dhicin.
Halkii laga heli lahaa foorno caag ah oo balaastig ah, waxaad isticmaali kartaa gasacyada iyo weelasha kale. Wixii keydinta ee qaboojiyaha waa karootada la kariyey ama koobi jiiska ah.
Habkani wuxuu u fiican yahay kuwa ku nool guri dabaq ah oo aanay awood u lahayn inay ku kaydiyaan beergooyska dhulka hoostiisa ama godka. Tani waxay u baahan doontaa karootada, brine (30 garaam oo cusbo ah halkii litir oo biyo ah).
Ku dhaq oo nadiifi xididada.
Ku rid iyaga biyo karkaraya 2-3 daqiiqo.
Wixii brine ah, ku shub milix, isku kari ah, ku shub khudaarta leh brine kulul.
Ku rid dhalooyinka ku jira weel biyo nadiif ah. Sterilize 1 litir oo karti ah 40 daqiiqo.
Nudhaha iyo talooyinka
Haddii maqaasiinka maqan yahay, dhulku wuxuu noqon doonaa mid aad u fiican oo lagu kaydin karo. Tani waxay badbaadineysaa xididada illaa bartamihii guga iyada oo aan qarsoodi lahayn.
Inta lagu jiro goosashada ka tago xididdada dhulka. Iska yaree dushooda.
Ku dabool carrada leh foorno, iyo dabooli leh filings iyo caleemo qallalan.
Dhar qalabka dul saaran ama polyetylen, ku dheji cidhifyada leh dhagax culus.
Khudaarta ayaa si fiican loogu isticmaali doonaa beerta, laakiin guga hore waa in la qodo.
Marka lagu keydiyo khudaarta guriga, haddii aysan jirin maqnaansho, xaalado badan oo muhiim ah waa in la buuxiyaa.:
Qoyaanku waa inay ahaadaan qiyaas ahaan 90-95%.
Tilmaamaha heerkulku maaha kuwo ka sarreeya +10 darajo. Haddii kale, karootiga ayaa bilaabi doona in uu Gagaab iyo sii daayo qoyaan.
Sidaas, sida loo kaydiyo xididdo iyo khudrado kale oo aan lahayn maqaasiinka ama qolka hoose? Si beergooyska loo ilaaliyo waqti dheer iyo in aan lumin sifooyinka, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco talooyinka soo socda.:
Heerkulku waa inuu ahaadaa mid degan, iyada oo aan isbeddel deg-deg ah lahayn
Nadiifi qolka. Ujeedooyinkaas, derbiga iyo dabaqada si ay u xakameeyaan sulphate copper ama lime.
Waqti ka waqti si loo baadho dalagga, gaar ahaan haddii khudaarta ay la xiriirayaan midba midka kale.
Haddii karootada lagu keydiyo qaboojiyaha, waxa fiican inaad isticmaasho bacaha balaastiga ah. Waxay si fiican u ilaaliyaan qoyaanka oo ha u oggolaan xididada inay qalalaan.
Baako la'aan, waa la mamnuucay. Sababtoo ah wareegga hawada ee kordhaya, xididdada si dhakhso ah ayey u bilaabaan inay qalalaan.
Isticmaalka hababka soo bandhigay ee karootiga kaydinta, ma aha lagama maarmaan in la yeesho hoose. U fiirso dhammaan shuruudaha, si habboon u fulinta diyaargarowga diyaarinta khudaarta, waxaad ku hayn kartaa ilaa guga xiga, oo aan lumin doono hantidooda. Dhamaan hababka waa sahlan, sidaa darteed gabi ahaanba beeraley kasta wuu samayn karaa.